Isikhumulo sezindiza (Kostroma): incazelo nomlando
Imizi eminingi emikhulu yaseRussia inesikebhe sezindiza. I-Kostroma ayinjalo. Isikhumulo sezindiza yedolobha yisakhiwo sezindiza esincane somoya wezokuthutha. Ngaphezu kwezindiza zezindiza, nazo zinama-helicopter nezindiza zoMnyango Wezokuvikela waseRussia.
Umlando wezindiza (Kostroma)
Isikhumulo sezindiza Sokerkino sinomlando ocebile. Ivela ngo-1944, lapho kwakhiwa indawo encane yezindiza, eyasetshenziselwa izidingo zomnotho kazwelonke. Izindiza zokuqala zePP-2 zafika endaweni yeKostroma ngoNovemba 1944. Yaqala ukusekelwa ngokugcwele enkundleni yezindiza.
Le indiza yayincane futhi ithwele abantu abahlanu kuphela nabasebenzi. Ngemuva kokuhamba kwendiza, wakwazi ukuhambisa ngesikhathi esisodwa noma iziguli ezinzima kakhulu. Ngo-1949, izindiza eziningana zathunyelwa.
Iningi labasebenzi be-aerodrome laliyisosha. Kusukela ngawo-1950, izindiza seziqalile ukuhlakulela umhlaba wezolimo nokuthutha iposi.
Ngo-1954, isikhumulo sezindiza (iKostroma) saqala ukuhamba ngezindiza ezide ezindizeni ze-AN-2. Ngo-1957, izindiza ze-MI-1 zaqala ukusetshenziselwa. Ngosizo lwabo, ukulandelwa kwamahlathi kanye nama-ambulensi kwenziwa. Izindiza zezindiza zazithuthukisa amabhiligade wokulungisa, zenze imisebenzi yezithombe nezokuthungatha.
Uhambo lokuqala oluvamile oluvela eKostroma ukuya eMoscow lwaqalwa ngu-Yak-40. Ngo-1975 isikhumulo sezindiza (iKostroma) savulelwa imizila yezizwe. Izindiza eziya eJalimane zaqala. Kwabe sekukhona ama-turboprops, athumela abagibeli emadolobheni amaningi ase-USSR.
Ngawo-1990, inani labantu abafisa ukundiza lancishiswa kakhulu. Abasebenzi baqedwa ngesigamu. Kodwa isikhumulo sezindiza saqhubeka ukusebenza. Inzuzo eyinhloko yayivela phesheya, lapho iKostroma ehamba khona. Ngonyaka ka-2006 Isikhumulo sezindiza sathola isimo sezinkampani ezihlangene. Wonke amasheya ayengabanikazi bezwe.
Kuthengwa izindiza ezintsha nezindiza zempahla. Baqala futhi ukuthuthela emadolobheni amakhulu nasezindaweni zokuhlala eRussia. Ngo-2010 isikhumulo sezindiza saqala ukuba yisifunda saseKostroma. I-airline iyaqhubeka nokuthuthukiswa kwayo.
Isikhumulo sezindiza (iKostroma) sinomgwaqo owodwa. Ubude bayo buyi-1700 amamitha, ububanzi buyiamamitha angu-50. Lo mhlubo uhlanganiswe nama-slabs okhonkolo. Esikhungweni sezindiza kunengqalasizinda encane. Lokhu kubangelwa ukulahlekelwa kwesithakazelo kule ndawo yezokuthutha emoyeni yabathwali baseRussia. Esikhathini sezindiza kukhona:
Ihholo lokududuzeka okukhulu;
Igumbi lomama nengane (zonke izinsizakalo kulokho zikhokhelwa).
Muva nje, isikhumulo sezindiza (i-Kostroma) seyikhululekile kakhulu futhi saqala ukuhlinzeka wonke amasevisi ajwayelekile, ahlinzekwa ukuhamba kwezindiza, ukunikeza ulwazi olugcwele mayelana nayo yonke imizila. Abagibeli bangakwazi ukuhamba ngezinyathelo ezidingekayo ngaphambi kokushayela esakhiweni sezindiza, phumula, bathenge ukudla okushisayo namaphephandaba amasha.
Kukhona igumbi lezokwelapha, ikamelo lemithwalo kanye nehhovisi letikiti, lapho ungathenga khona amathikithi okuqala wezindiza. Ngo-2000 isiphephelo sezindiza sasungulwa futhi sakhiwe kabusha. Ngenxa yobunjiniyela, ukulinda abagibeli kuye kwaba mnandi kakhulu. Kumakholwa ezakhiweni zesikhumulo sezindiza kukhona igumbi elikhethekile lemithandazo.
Isikhumulo sezindiza (Kostroma) - inombolo yakhe yocingo engatholakala engosini esemthethweni yebhizinisi, isisekelo sezindiza zezwe zaseKostroma. Lenza ukuthutha abagibeli hhayi kuphela esifundeni, kodwa nakwezinye izindawo zaseRussia. Izindiza zenziwa yizindiza ezincane - izindiza zezindiza nezindiza. Kunendawo ye-aero yendawo endaweni yesibhuloho.
Ungafika kanjani lapho
Isikhumulo sezindiza sisemaphethelweni eKostroma. Ngaphandle kwemithwalo, isikhungo singafinyelelwa ngamabhasi Nos 13 no-21, noma ngamabhasi Nos 46 no-99. Uma imithwalo itholakala, izinsizakalo zamatekisi zilula kakhulu. Uhambo luzothatha kusukela kumaminithi angu-10 ukuya kwangu-15 (kusukela enkabeni yeKostroma).
Airline "Kogalymavia": imikhumbi
Delta Airlines. Inkampani yezindiza Delta Airlines: Izibuyekezo
Museum of Fine Arts weRiphabhulikhi Karelia: incazelo
Okuphansi ikhalori utamatisi fresh - isihluthulelo yimpumelelo Ukudla ukudla
Ifomu esinamathelayo ingubo: imithetho Ukukhetha